သမုဒ္ဒရာဘုရင်ကလောင်းကစားငါးဂိမ်း3Plus အား Buffalo မိုးကြိုး – အမြင့်အမြတ်ဦးပိုင်ငါးအားကစားပြိုင်ပွဲ. ဂိမ်းဆော့ဗ် Customize. Excellent ကကက်ဘိနက်.
ဂိမ်း Mahcine ငါးမျှား
Arcade ဂိမ်းအမြင့်အမြတ်အဆိုပါ Kylin မိုးကြိုးငါးမျှား
သမုဒ္ဒရာဘုရင်ကလောင်းကစားငါးဂိမ်း3Plus အား Buffalo မိုးကြိုး
Arcade ဂိမ်းသမုဒ္ဒရာဘုရင်ကငါးမျှား3Plus အားအရှိန်မြင့်မီးဘေး
ငါး Hunter ဂိမ်းသမုဒ္ဒရာမှာဘုရငျ3အဆိုပါနက်ရှိုင်း၏ Plus အားမာစတာ
ဂိမ်းဆော့ဗ်သမုဒ္ဒရာဘုရင်ကသေနတ်ပစ်ငါး3Plus အားမုတ်ဆိတ်နက်ရဲ့ Fury
ဂိမ်းများသမုဒ္ဒရာဘုရင်ကငါးမျှား3Plus အား Aquaman ဘုံ
Hunter ဂိမ်းသမုဒ္ဒရာ king3 Plus အားမီးသတ် Phoenix မြို့ငါးမျှား
သမုဒ္ဒရာသည်ရှင်ဘုရင်လောင်းကစားငါးဂိမ်းဇယား3ပိုများသော Thanos Avengers
ဦးပိုင် 5% ~ 50% နှင့်အတူလောင်းကစားအမြင့်အမြတ်ငါးဂိမ်း
2 ~ 10 ကစားသမားဂိမ်းအဖြစ် configured ခံရ
More Fish ငါးဇာတ်ကောင်နှင့်အတူ High Quality 3D Graphics
သမုဒ္ဒရာဘုရင်ကလောင်းကစားငါးဂိမ်း Play လုပ်နည်း3Plus အား Buffalo မိုးကြိုး
ကစားသမားများဟာသူတို့ရဲ့သေနတ်နှင့်၎င်း၏သုံး setting များကိုသုံးစွဲဖို့အတှကျဂိမ်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဖြစ်ပါသည် - သာမန်, အရှိန်နှင့်ပစ်မှတ်များအတွက်ရည်ရွယ် - ဂိမ်း၏အချိန်ဘောင်အတွင်းတတ်နိုင်သမျှအများအပြားငါးဖမ်းရန်.
တွင် ငါးဂိမ်းလောင်းကစား သမုဒ္ဒရာမှာဘုရငျ3Plus အား Buffalo မိုးကြိုး ဖမ်းရန်ကွဲပြားခြားနားသောငါးရှိပါတယ်, တန်ဖိုးရှိကွဲပြားခြားနားသောအချက်တန်ဖိုးများများမှာအားလုံးသော. ကစားသမားဂိမ်းကာလအတွင်းသူတို့ကဖမ်းငါး၏နံပါတ်နှင့်တန်ဖိုးကိုအားဖြင့်သူတို့ရဲ့အမှတ်ရမှတ်တိုးမြှင့်.
အဓိက သမုဒ္ဒရာမှာဘုရငျ Plus အား: ကျွဲမိုးကြိုး ဂိမ်း features နဲ့ mini ကိုဂိမ်းတွေနဲ့ layered ဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ကစားသမားတွေပိုပြီးအချက်များဝင်ငွေမှတစ်ဦးမြင့်မားအခွင့်အလမ်းပေးနှင့်အလှည့်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ဤသူတို့သသုံးစွဲဖို့အရေးကြီးလှသည်, ပိုပြီးအနိုင်ရရှိတဲ့ဝင်ငွေအလားအလာ.
အဆိုပါထဲမှာတပ်ဆင်ထား ငါးဂိမ်းလောင်းကစား သမုဒ္ဒရာမှာဘုရငျ3အဆိုပါဖီးနစ်၏ Plus အားဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ ပါဝင်:
1. ကြှဲ – အကြီးအကဲ
အဆိုပါ Buffalo အောင်မြင်စွာထိမှန်သောအခါ, ကွင်းဆက်ကြောင့်ဖမ်းရန်ပြင်သို့ပစ် လိုက်. မည်ဖြစ်ပြီးကြောင့်တိုက်ပွဲ Mode ကိုဝင်ပါလိမ့်မယ်. တိုက်ပွဲစဉ်အတွင်း, အဆိုပါ Buffalo ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တိုင်းခခြှေဲပိုပြီးမှတ်ပိုက်ကွန်ကိုဦးမည်. အဆိုပါ Buffalo ဖမ်းမိလျှင်ကတစ်ဦးထက်ပိုပြင်းထန်သောတိုက်ခိုက်မှုစတင်ပါလိမ့်မည်နှင့် player မြင့်မားဆုအနိုင်ရပါလိမ့်မယ်.
2. Phoenix မြို့ – အကြီးအကဲ
ကစားသမား phoenix ၏ဖီးနစ်ယငျရဲတို့ဖမ်းမိတဲ့အခါမှာမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိသမျှဖမ်းရန်ကိုဖြတ်ပြီးပျံသန်းဦးမည်.
3. မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း - သူဌေးက
အဆိုပါမိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း Catching ပင်လယ်၌ရှိသမျှသောငါးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ရန်မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်း၏ရှစ်လှိုင်းတံပိုးကိုခေါ်သောနိုင်ပါတယ်.
4. ခခြှေဲ Hammer ဂဏန်း
တစ်ဦးတပ်များ Hammer ဂဏန်း Catching ချလျှပ်စီးရိုက်နှင့်မျက်နှာပြင်အနှံ့လှည့်ပတ်ပျံသန်းဇာတ်ကောင်သတ်ဖြတ်.
တစ်ဗုံးဂဏန်း Catching ကျယ်ပြန့်ပေါက်ကွဲမှုအတွက်ချည်နှောင်ဗုံးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်.
သငျသညျအခြိနျအကနျ့အများအတွက်လေဆာရောင်ခြည်ကို အသုံးပြု. တဦးတည်းကိုပစ်ခတ်ရလိမ့်မယ်.
7. Breaking လေ့ကျင့်ခန်းဂဏန်း
တစ်ဦး Breaking လေ့ကျင့်ခန်းဂဏန်းဖမ်းမိသောအခါကစစ်ရေးလေ့ကျင့်မီး, ထိုဒေသတွင်မထိုးဖောက်နှငျ့ငါးဖမ်းဖို့အခွင့်အလမ်းရှိစေခြင်းငှါ.
ရွှေကစားတဲ့အပိုဆုဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. သင်ကကစားတဲ့ရပ်တန့်ဖို့အညွန့် button ကိုနှိပ်.
သမုဒ္ဒရာဘုရင်ကလောင်းကစားငါးဂိမ်း3Plus အားအဆိုပါဖီးနစ်၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများအရကစားသမားများအကြားပြင်းထန်သောယှဉ်ပြိုင်မှု၏နာရီသည်၎င်း၏ထင်ရသောအဆုံးမဲ့အာဏာကိုအထိကျေးဇူးတင်စကားကတိပေးထား, မယုံနိုင်လောက်အောင်ထူးခြားတဲ့ဇာတ်ကောင်, နှင့်အဖျက်လက်နက်များ. မိန်းမတပိုင်းငါးတပိုင်းနှင့်ဘာသာရေးနဂါးပါဝါမှတက်မီးဘေးမုန်တိုင်း Boosters မှ, အဆိုပါကစားသမားဒီဂိမ်းထဲမှာ hidden ဆုလာဘ်ခစျြလိမျ့မညျ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကောင်များနှင့်လက်နက်များ၏အချို့တို့ပါဝင်သည်:
Phoenix မြို့မီးလောင်: ရက်ရက်ရောရောဆုကြေးငွေနှင့်အတူပိုင်ဆိုင်ကစားသမားများကိုမျက်နှာပြင်ကိုဖြတ်ပြီး လိုက်. တိုက်
မီးသတ်နဂါးလိပ်: ငါးကိုဖမ်းယူဖို့ screen ကိုဖြတ်ပြီး Spins နှင့်ဆုကြေးငွေဒင်္ဂါးပြားထောင်ပေါင်းများစွာ၏နဲ့အတူကစားသမားကမ်းလှမ်း
လေဆာအလင်းတန်း: ကျယ်ပြန့်ရိုက်, ယင်း၏လမ်းကြောင်းအတွက်မဆိုငါးကိုဖျက်ဆီးဖို့မျက်နှာပြင်အနှံ့အစွမ်းထက်လေဆာ
ခခြှေဲ Hammer: မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိမည်သည့်အပေါင်းတို့နှင့်ဇာတ်ကောင်ရှင်းလင်းရေးတဲ့အစွမ်းထက်ပေါက်ကွဲမှုထုတ်လုပ်
R ကို&: D အဆိုပါffice
F ကိုishing တစ်ဦးကrcade , GAmE စာရင်း
1. Topgame software ကို R ကို&တရုတ် D နှင့် manufacturingin
2. profitgame software ကိုကိုင်ပြီး Customizedhigh
4. ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်မူထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း play, လှပသောရုပ်ပုံ, တောက်ပသောအသွင်အပြင်, ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားလုပျထုံးလုပျနညျး,ယုံကြည်စိတ်ချရသောဟာ့ဒ်ဝဲ, တည်ငြိမ်ဝင်ငွေ, အသစ်အချိန်မီ update ကို
အဖုံး & ပို့ခြင်း
ပို့ဆောင်ချိန် : 15ပင်လယ်ပြင်ကနေတဆင့် ~ ရက် 20
မေး: ငါ TAS မှတဆင့်ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဂိမ်းဘုတ်အဖွဲ့ဖွံ့ဖြိုးနိုင်သလား?
တစ်ဦးက: ဟုတ်ကဲ့သင်သည်တတ်နိုင်! TAS ဖှံ့ဖွိုးတိုးတန်ဆောင်မှုပေးထားပါတယ်. ရိုးရှင်းစွာအကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့အိုင်ဒီယာပေးနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်လျောညီထွေနိုင်ပါတယ်. ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ options များနှင့်ဆက်စပ်နိမ့်ဆုံးအမိန့်ပမာဏရှိပါတယ်. အဆိုပါလောင်းကစားဝိုင်းဂိမ်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆက်စပ်စျေးနှုန်းနှင့်အချိန်လိုင်းနှင့်ဆက်သွယ်ကျွန်တော်တို့ကို.
တစ်ဦးက: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးနောက်ကွယ်မှရပ်နှင့်အမှုကြောင့်ထုတ်လုပ်သူရဲ့အပြစ်အနာအဆာမှချွတ်ယွင်းကြောင်းမည်သည့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြုပြင်အစားထိုးမညျ. အာမခံမေးခွန်းများကိုနှင့်အတူနည်းပညာပံ့ပိုးမှုဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာ, ကျနော်တို့ဝယ်ယူများ၏ရက်စွဲကိုအတည်ပြုနိုင်အောင်ထုတ်ကုန် serial number ပေးပါ. အဆိုပါဂိမ်းဘုတ်အဖွဲ့: 12 ဝယ်ယူ၏နေ့စွဲကနေတစ်လအာမခံ.
မေး: အဆိုပါ PCB ဘုတ်အဖွဲ့ပျက်ကွက်သည်အပြုပြင်နိုင်သလား? ဘယ်လောက်ကြာအဲဒါကိုပြုပြင်ကြရယူခြင်းနှင့်လိုအပ်သောကုန်ကျစရိတ်ပါလိမ့်မယ်?
တစ်ဦးက: ကအာမခံကာလအတွင်းနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု Non-လူ့အချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သူကဆဲအာမခံအကျိုးကျေးဇူးများကိုအဘို့အခွင့်ဖြစ်ပါသည်. ကအာမခံကာလထက်ပိုပြီးဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှမကြာမီအဖြစ်ပြုပြင်နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်လိုအပ်သောကုန်ကျစရိတ်ဘို့သင့်ကိုအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်. ကျွန်တော်တို့ကို Give 3-7 အဲဒါကိုပြုပြင်ရှိသည်ဖို့လုပ်ဆောင်နေရက်ပေါင်း (ရေကြောင်းအချိန်ဖယ်ထုတ်ပြီး).
မေး: ကျနော်တို့အောင်မြင်စွာဘုတ်အဖွဲ့ကို install နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကြုံတွေ့ရမနိုင်လျှင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်?
တစ်ဦးက: သငျသညျလိုအပ်ပါကအမြဲအွန်လိုင်းအကူအညီများပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း purchase.We အပေါ်မှာပူးတွဲထုတ်ကုန်ကို manual နှင့်ဝါယာကြိုးညွှန်ကြားချက်ရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်.
2020 အမြတ်အစွန်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားမိုဘိုင်းဂိမ်း APP
အိုး-O-ရွှေ Touchscreen Multi-ဂိမ်းဘုတ်အဖွဲ့
IGS အားဖြင့်စက်များပေါက် FAFAFA လောင်းကစား
များသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အားဖြင့် slot မင်္ဂလာ Lantern လောင်းကစား
Adress: A1201, Heng ကို Creative ပန်းခြံပြေး, ShiXin လမ်း, Panyu ခရိုင်, ကွမ်ကျိုး, တရုတ်နိုင်ငံ
Skype ကို: gztimespace
ကွမ်ကျိုးအချိန်-Space ကိုကာတွန်းနည်းပညာတက္ကသိုလ် Co. ,, Ltd မှ. © 2021 မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ